धनुषामा गुट छैन, कांग्रेस मात्र छ :: Tarun Khabar: Digital Online Paper from Nepal
धनुषामा गुट छैन, कांग्रेस मात्र छ
गणेश झा, नेता, नेपाली कांग्रेस धनुषा
नेपाली कांग्रेस धनुषाका जिल्ला सदस्य गणेश झा २०६० सालमा नेविसंघ धनुषाको सभापति थिए । दुईपटक नेपाली कांग्रेसको नगर सदस्य भएका झा तार्किक पनि छन् । राजनीतिमा सम्भावना बोकेका थोरै युवाहरूमा पर्ने झा २०४६ सालदेखि नै निरन्तर नेपाली कांग्रेसका प्रत्येक कार्यक्रममा संलग्न छन् । उनै झासँग जनकपुर उपमहानगरको चुनावका सन्दर्भमा भएको कुराकानी ः
० जनकपुर उपमहानगरपालिकमा नेपाली कांग्रेसले दिएको उम्मेदवारलाई समाजले कसरी चिन्दछ ?
– जनकपुर उपमहानगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कांग्रेसले नगर सभापति मनोज साहलाई टिकट दिएको छ । साह राजनीतिक परिवारको सदस्य भएकाले उहाँमा त्यो संस्कार छ । उहाँका पिता २०२६ सालदेखि नै कांग्रेसमा आबद्ध हुनुभएको हो । मनोजजी २०४४ सालदेखि निरन्तर पार्टीमा संक्रिय हुनुहुन्छ । सात वर्ष कुवारामपुर हाइस्कुलको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुनुभयो । हाम्रो समाजले उहाँलाई सामाजिक र राजनीतिक अगुवाका रुपमा चिन्छ । सामान्य जनताको कामका लागि उहाँ जतिबेला पनि खट्नु हुन्छ, त्यो सकारात्मक पक्ष हो । अर्को पक्ष भनेको मनोजजी सरल स्वभावको हुनुहुन्छ । धेरै काम गर्ने इच्छाशक्ति भएको व्यक्ति हो उहाँ । नयाँ र युवा मान्छे भएकाले पनि मनोजजीप्रति आमजनताको आकर्षण छ । सामान्यतः उहाँको परिचय यही हो । उहाँसँग केही गर्ने जोश र जाँगर पनि छ । युवा भएकाले पर्याप्त खट्न सक्छन् ।
पहिले पहिले कांग्रेसमा टिकट दिँदा पार्टीभित्र लविङको कुरा पनि आउथ्यो । यस पटक त्यो अवस्था छैन । त्यसले गर्दा एउटा गुटले पाएपछि अर्को गुटका उम्मेदवार रिसाउने गर्थे, तर अहिले त्यस्तो स्थिति छैन । जसरी पनि कांग्रेसलाई जिताउनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान सबैमा देखिएको छ । मेयरमा टिकट पाउनु भएका मनोज साझा उम्मेदवार हुनुभएको छ । त्यसैले उहाँलाई असहयोग गर्ने सवाल नै छैन । पूर्वमेयर बजरंग साहले पार्टीका नेता र टेलिभिजनमै पनि अन्तर्वार्ता दिएर मनोजलाई सहयोग गर्ने बताइसक्नु भएको छ । विगतको अनुभवका आधारमा पनि एउटा ठूलो, प्रभावकारी पार्टीको साथ र सहयोगविना जनकपुरले सुन्दर सहरको कल्पना गर्न सक्दैन भन्ने देखिएको छ ।
० राजपा नेपाल, एमाले, फोरमका उम्मेदवारहरूको तुलना गर्दा के पाउनु हुन्छ ?
– पार्टीहरूले उम्मेदवारको टुंगो लगाइसकेका छैनन् । नेपाली कांग्रेस मुलुकको मियो पार्टी हो, स्थायी शक्ति हो । अन्य पार्टी बेलाबखत देखिने खहरे हुन् । आज छ भोलि छैन । एमाले मधेसी जनताको मागको विपक्षमा छ भन्ने जनताले बुझेका छन् । राजपामा राजनीतिक चरित्र नै छैन, उसले सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने काम गरेको छ । जनकपुरको विकासमा अवरोध सिर्जना गरेको छ ।
० जनकपुर उपमहानगरपालिकामा कांग्रेसको प्रतिस्पर्धा कोसँग हुने स्थिति छ ?
– गैरराजनीतिक चरित्र भए पनि हाम्रो प्रतिस्पर्धा राजपा नेपालका उम्मेदवारसँग हुने सम्भावना छ । राजपाको अराजनीतिक चरित्रका कारण त्यो पार्टीका आकांक्षीहरूबीच व्यक्तिगत झगडा हुने देखिन्छ । त्यसो हुँदा कांग्रेस ले सजिलै चुनाव जित्न सक्छ ।
० फोरम नेपालको अवस्था के हो ?
– फोरम नेपालसँग हाम्रो प्रतिष्पर्धा छैन । फोरम जनकपुरमा धेरै कमजोर छ । हजार पाँच सय भोटले तल माथि हुने पार्टीलाई पो प्रतिस्पर्धी पार्टी भन्छन्, तर जनपकुरमा नेपाली कांग्रेस धेरै अगाडि छ । अरु पार्टी धेरै पछि छन् । एमालेको शब्दमा भन्ने हो भने अरु पार्टीलाई धरहराको टुप्पोबाट हेर्नु पर्ने अवस्था छ ।
० बलियो शक्तिका विरुद्ध सबै एक हुने र पार्टीभित्र अन्तर्घात हुने स्थिति होला नि ?
– धनुषामा नेपाली कांग्रेस पहिलो शक्ति हो, तपाईले भनेको यो कुरा सही हो । पहिलो चरण र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा कांग्रेस दोस्रो भएकाले मनोवैज्ञानिक रूपमा कांग्रेस एक भएको छ । यहाँ क्रियाशील अन्य पार्टीका शुभेच्छुक पनि कांग्रेसले नै जितोस् भन्ने चाहन्छन् । कांग्रेस जित्दा आफूलाई सुरक्षित ठान्छन् । साना व्यापारी, ठूला व्यवसायी, बुद्धिजीवी सबैको भरोसा कांग्रेसमाथि छ । त्यसैले नेपाली कांग्रेसले जित्छ नै भन्न सकिन्छ ।
० धनुषामा नेपाली कांग्रेसको स्थिति अहिले कस्तो छ ?
– धनुषामा चुनावको वातावरण बनेको छ । हामी व्यापक प्रचार प्रसारमा जुटेका छौ । वडावडामा विभिन्न सर्वे टोली खटिएको छ । पार्टी संयन्त्र पूूरै परिचालित छ ।
० धनुषामा नेपाली कांग्रेसले कति सिट जित्ला ?
– धनुषामा आठ नगरपालिका, आठ गाउँपालिका र एउटा उपमहानगरपालिका छ । १७ वटा पालिकामध्ये ११ पालिका जित्ने निश्चित छ । बाँकीमा चर्को प्रतिस्पर्धा छ ।
० जिल्लामा समग्र रूपमा कोसँग प्रतिस्पर्धा हुन्छ त ?
– समग्रमा राजपा र एमालेसँग प्रतिस्पर्धा हुन्छ । राजपासँगको प्रतिस्पर्धा खासगरी भित्री मधेसमा हुन्छ भने राजमार्गसँग जेडिएका पालिकामा एमालेसँग प्रतिस्पर्धा हुन्छ । बर्दिवास, लालबन्दीलगायतका ठाउमा एमालेसँग प्रतिस्पर्धा हुन्छ । राप्रपा त यहाँबाट हराई नै सकेको छ ।
० धनुषामा माओवादीसँग प्रतिस्पर्धा हँुदैन ?
– धनुषामा माओवादीको संगठन नै छैन भने पनि हुन्छ । यहाँका माओवादी नेता रामचन्द्र झा कहिले कुन पार्टीमा जान्छन्, कहिले कुन पार्टीमा जान्छन्, ठेगान नै हुँदैन । अहिले उनी फेरि माओवादीमा फर्केका छन् भन्ने सुनिन्छ । रामचन्द्र झा जहाँ जहाँ जान्छन्, उनका कार्यकर्ताहरू उनी गएको पार्टीमा पछि पछि जान्छन् भन्ने छैन । त्यो उनको भ्रम मात्र हो । त्यसैले धनुषामा माओवादी धेरै कमजोर छ । माओवादी विश्वासिलो शक्ति होइन भन्ने बुझाई जनतामा छ ।
Tarun Khabar0response सोमबार,१९ भाद्र २०७४ 799 Views